Iphrofayela - IShanghai DaDa Electric Co., Ltd.
Eyasungulwa ngo-1986, SHANGHAI DADA ELECTRIC CO., LTD yamukelwa njengomunye wabakhiqizi abahlonishwa kakhulu ezweni lonke nabathengisi bamandla aphansi I-CIRCUIT BREAKER eChina.
Ifektri yethu ihole ekusebenziseni uhlelo lwe-IS09001 Management Management System. Imikhiqizo eminingi iqinisekisiwe ngaphansi kwesitifiketi samazwe omhlaba, njengeCB, CE, CCC., SEMKO, KEMA, ASTA, ROHS.
Njengamanje, sikhiqize futhi sakhipha imikhiqizo engaphezu kuka-160, sinamagesi aphansi kagesi afaka zonke izinhlobo zama-Circuit Breaker, Switches, and Electrical Accessories njll. Njengomphumela wemikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme kanye nokuhlinzekwa kwamakhasimende okuvelele, sizuze umhlaba wonke inethiwekhi yokuthengisa ifinyelela ISouth East Asia, Middle East, i-Ningizimu Melika, i-Afrika ne-Europe.
Ukunikezwa kokuthenjwa kwesifunda okunokwethenjelwa ngonyaka
Ilungelo lobunikazi lomkhiqizo
Amabhizinisi angama-30 aphezulu okuthekelisa
· Isungulwe ngo-: 1986;
Isipiliyoni se-OEM ne-ODM: 30+ iminyaka;
Umphumela wonyaka: 3,000,000 ama-breakers wesifunda;
Ukukhiqizwa Kwe-MCB Ngonyaka: 2,000,000 ama-PC;
Ukukhiqizwa Konyaka Komhlangano we-MCCB: 900,000 ama-PC;
· Usayizi wefektri: 50,000 m2;
Imishini Yokucubungula Okuyinhloko: 100 amasethi;
Imishini Yokuhlolwa Kwekhwalithi: 50 amasethi;
Abasebenzi bethu: 400 abasebenzi;
Onjiniyela Bezobuchwepheshe: 32 abasebenzi;
Ukwakhiwa kokwaneliseka kwamakhasimende kwamaphrojekthi wekhwalithi, ukudala indawo enhle yezenhlalo; Ukwenza ngcono uhlelo lokuqinisekisa ukuphepha, ukukhuthaza ukuthuthukiswa okuqhubekayo kokuphathwa kwamabhizinisi.
Ukuphathwa kahle kokholo, ukukhipha imikhiqizo emihle, ukuzinikela emphakathini, kusiza abasebenzi.
Cabanga kakhulu ngamakhasimende futhi wenze kangcono kumakhasimende